तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अचानक घर बोलाएर किन गरियो हत्या?पूरा घटना र आशंकाको यस्तो निस्कियो निष्कर्ष |
September 9, 2021 adminLeaveaComment on तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अचानक घर बोलाएर किन गरियो हत्या?पूरा घटना र आशंकाको यस्तो निस्कियो निष्कर्ष
तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अचानक घर बोलाएर किन गरियो हत्या ?हिन्दू नारीहरुका सामू तीजको रमझम भित्रिएको बेला रुपन्देहीमा एउटी चेलीको निकै रहस्यमय मृत्यु घटना बाहिर आएको छ । दुई वर्ष अघिमात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकी रुपन्देही तिलोत्तमा-८ मणिग्रामस्थित ४ नम्बर टोल माइती घर भएकी २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा रहस्यमय मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।उक्त नगरपालिका-५ घर भएका ४३ बर्षीय टीका पौड्यालकी श्रीमती सीताको आफ्नै घरको कोठामा रहस्यमय
मृत्यु भएको घटना मंगलबार माइतीजनले पत्रकार सम्मेलन गरि बाहिर ल्याएका हुन् ।भदौ ६ गते तीजसमेत मानेर घर फर्किने गरि माइतीमा आएकी सीतालाई श्रीमान टीकाले भदौ १९ गते दिउँसो घरमा भतिजको बर्थडे छ ‘तिमी घर जाउ म पनि साँझ घर आउँछु’ भनेर पाल्पाबाट फोन गरे ।
मृतक सीता पौड्याल:उनले श्रीमानको बचन हार्न नसकी उनी घर फर्किइन् । उनी त्यस दिन दिउँसो घरबाट हिँडेका थिए । माइतीले उनी घरबाट हिँडेदेखि राति ९ बजेसम्म माइतीले फोन गरिरहे तर उनको फोन उठ्दै उठेन । अर्काे दिन एक्कासी अर्को माइतीलाई काम छ भनेर टीकाको घरबाट बोलाइयो । माइतीजन त्यहाँ पुग्दा मुहार रक्ताम्मे अवस्थामा सीताको मृत्यु भइसकेको थियो । उक्त दृश्य देख्न साथ त्यहाँ पुगेका सीताका बाबु-आमा बेहोस भई ढले ।
श्रीमानका साथमा मृतक सीता,घटनाक्रम यस्तो छ :तीज मान्न माइती आएकी सीता आमा–बाबुलगायतका माइतीजनसँग तीजमा के के चिजहरु किनमेल गर्ने भन्ने बारे चर्चा पनि चल्दै थियो । त्यही क्रममा एक्कासी उनका श्रीमान टीकाको फोन आयो । ‘ल आज साँझ तिमी घर आऊ दिदीको छोराको बर्थडे मनाउनु छ’ भन्दै टीकाले फोनमा भने ।
मामा आकाश भन्छन् :-त्यसैदिन साँझ करिव साढे ६ बजेको समयमा सिताका श्रीमान ससुराली आउँछन् र मेरो घरमा आई तपाईकी छोरी अब वितारा पर्ने भई । मैले त आनन्दको जीन्दगी जिउछु भनी धम्कीपूर्ण कुरा गरी अरु केही नबोली अगाडीको ढोका जोडले लगाउँदै हुँईकिदै त्यहाँबाट हिँडे हुन् । मेरी भान्जीको घर र मेरो पसल सँग–सगै छ । उनले मदिरा पिएको आभास हुन्थ्यो । त्यसलगत्तै मैले पटक पटक भान्जीलाई फोन हाने । साँझ ७ बजे देखि साँझ ९ बजे सम्म भान्जीलाई फोन हान्दा पनि फोन उठेन ।
आशंकाका घेराहरु:घटना राति २ बजे देखि ५ बजे भित्रको भएको देखिन्छ । एउटै कोठामा सुतेकी श्रीमती सीता यदि आत्माहत्या गर्न लागेको भए श्रीमान चाँहीले बचाउने प्रयास गर्न पर्ने कि नपर्ने ? बचाउनकै लागि डोरी पासो काटिएको हो भने श्रीमतीको ज्यान गइसके पछि परिवारका सदस्य र टोल छिमेकलाई खबर गर्ने कि घर छाडेर भाग्ने ?
उनले भदौ ६ गते नै तानसेनबाट गाडीमा बोकेर श्रीमतिलाई तिज मान्ने गरि माईतीमा छाड्न आए पछि फेरी एक्कासी किन बोलाए त्यस साँझ ? कतै योजनाबद्ध त थिएन ? झुण्डिएर मृत्यु हुने मानिसहरुको प्राय मुखबाट रगत बगेको नदेखेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, सीताको मुखबाट रगत निकै बगेको देखिन्छ । शरीरका विभिन्न भागमा निला डामहरु देखिन्छ । झुण्डिएर कि घाँटी कसिएर मारियो ? यस विषयमा माइतीलाई डाक्टरले झुण्डिएर आत्माहत्या गरेको रिर्पोट दिएको भन्दै त्यसैमा टेकेर प्रहरीले किटानी जाहेर लिन मानेन ।कतै माथील्लो दवाव त छैन ? माइतीजनले यस्तो आशंका गरेका छन् । श्रोतका अनुसार आरोपी ज्वाँईका एक जना आफन्त नेपाल प्रहरीको माथील्लो पोष्टमा रहेका छन् । आरोपित परिवार निकै पैसावाला पनि हुन् ।
मृतकका माइतीजन:झुक्काएर आधा उमेर कान्छि बिवाह:माइतीजन भन्छन्- दुई वर्ष अघि मागी विवाह गरियो । स्टिल बडि भएको हेर्दा उमेर पुगेजस्तो नलाग्ने, केटा कन्य नै होला भन्ने ठानियो । तर पछि बुझ्दै जाँदा उनले पहिला नै विवाह गरेका रहेछन् । पहिलाकीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर यता अविवाहित हुँ भन्दै झुक्काएर २५ वर्षकी हाम्री चेलीलाई ४० बर्ष नाघेका उनले झुक्काएर विवाह गरेको थाह पाइयो ।मृतक सिताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारी भने भक्कानिँदै रुँदै भन्छन्–‘मेरी छोरीलाई मारेकै हुन् । उसले आमासँग भन्ने गर्थि रे–‘साँझ रक्सीले टिल परेर आएपछि बसि खानु हुन्न आमा ।
अन्ततः बुधबार प्रहरीले आत्माहत्या दुरुत्साहनको मुद्धा दर्ता गरेपछि धर्ना कार्यक्रम तितर विवतर भएको छ । तर, पनि माइतीजन पक्ष भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरु कानुनी सल्लाह लिँदै र भोलिदेखि विभिन्न सरोकारवालहरु कहाँ न्यायका सन्दभर्मा छलफल गर्न जाने कार्यक्रम बनाएका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डिएसपी मदन कुँवरले आत्मा हत्या दुरुसाहनको मुद्धा दर्ता गरिएको र हत्याको पाटोबाट पनि अनुसन्धान हुने बताए । उनले उनका श्रीमानलाई नियन्यन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भईरहेको बताए ।मृतक सीताको परिवार गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका ५ वस्तु का हुन् । उनीहरु रुपन्देहीमा बसाइसराई गरे पनि आवत जावत गरिरहेका थिए ।साभार – news24tv
हिन्दु नारीहरुको महान् पर्व हरितालिकाको अघिल्लो दिन हवात्तै घट्यो सुनको भाउ
फेरि ह्वात्तै घट्यो खसी-बोकाको मासुको मुल्य,हेर्नुहोस अब यति सस्तोमै पाइने भो !
एकाबिहानै खुशीको खबर,नजिकै आउंदै गरेको महान चाड दशैँमा अब घरदेखी टाढा रहेका नेपालीहरु घर जान पाउने,यातायात व्यवसायीले जसरी पनि यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याउने